Nhau - Shaving matipi evakadzi
Kana uchiveura makumbo, underarms kana bikini nzvimbo, kunyorova kwakakodzera idanho rekutanga rakakosha. Usamboveura ndebvu usati watanga kunyorova bvudzi rakaoma nemvura, sezvo bvudzi rakaoma rinonetsa kucheka nekutyora mupendero wakanaka wereza. Nhare inopinza yakakosha pakuveura ndebvu, yepedyo, isina kutsamwa. Reza rinokwenya kana kudhonza rinoda chisvo chitsva ipapo.
1.Moisten ganda nemvura kwemaminitsi matatu, wozora gobvu rekugera gel. Mvura inowedzera bvudzi, zvichiita kuti zvive nyore kucheka, uye iro rekugera rinobatsira kuchengetedza hunyoro.
2.Shandisa kwenguva refu, nyangwe sitiroko pasina kushandisa kumanikidza kwakanyanya. Shave nokungwarira pamusoro penzvimbo dzemabhonzo senge makumbo, shins nemabvi.
3.Pamabvi, kukotama zvishoma kudhonza ganda risati raveura, sezvo rakapetwa ganda rinonetsa kuveura.
4.Stay kudziya kudzivirira hanzi mapundu, sezvo chero kusagadzikana muganda pamusoro kunogona kuomesa kuveura.
5.Wire-dzakaputirwa mashizha, senge akagadzirwa naSchick® kana Wilkinson Sword, anobatsira kudzivirira asina hanya nicks uye kucheka. Usamanikidze zvakanyanya! Ingoregedza banga uye mubato zviitire iwe basa
6.Rangarira kuveura mugwara rebvudzi kukura. Tora nguva yako uye shave zvakanaka pamusoro penzvimbo dzinonetsa. Kuti uve nesheve yepedyo, nyatsoveura uchienderana nezviyo zvekukura kwebvudzi.
1.Moisten ganda uye isa gobvu yekuveura gel.
Simudza ruoko rwako kumusoro uchiveura ndebvu kudhonza ganda rakasimba.
3.Sheve kubva pasi kumusoro, uchibvumira reza kuti itedzere pamusoro peganda.
4.Avoid kuveura nzvimbo imwechete kanopfuura kamwe chete, kudzikisira kutsamwa kweganda.
5.Wire-dzakaputirwa mashizha, senge akagadzirwa naSchick® kana Wilkinson Sword, anobatsira kudzivirira asina hanya nicks uye kucheka. Usamanikidze zvakanyanya! Ingoregedza banga uye mubato zviitire iwe basa.
6.Avoid kuisa zvinwiwa zvinodhaka kana antiperspirants nekukurumidza mushure mekuveura ndebvu, sezvo kuita kudaro kunogona kukonzeresa kutsamwa uye kubaya. Kuti udzivise izvi, shaura underarms husiku uye upe nzvimbo yacho nguva yekugadzikana usati washandisa zvinwiwa.
1.Moisten bvudzi kwemaminetsi matatu nemvura wozoisa gobvu rekugera gel. Kugadzirira uku kunofanirwa, sezvo vhudzi riri munzvimbo yebhikini rinowanzo kuve rakakora, denser uye curlier, zvichiita kuti zvive zvakaoma kutema.
2.Bata ganda munzvimbo yebhikini zvinyoro, sezvo iri yakatetepa uye yakapfava.
3.Sheve yakatwasuka, kubva kunze kusvika mukati mechidya chepamusoro uye nzvimbo yekugomera, uchishandisa zvinyoro nyoro.
4.Sheve kazhinji gore-rese kuti uchengete nzvimbo yacho isina kutsamwa uye bvudzi rakadzika.
Zviitwa mushure mekuveura ndebvu: Ipa ganda rako maminetsi makumi matatu kubva
Ganda rinonyanya kunetsekana pakarepo mushure mekuveurwa. Kudzivirira kuzvimba, rega ganda rizorore maminetsi makumi matatu zvisati zvaitika:
1. Kuzora mafuta, zvinyoro kana mishonga. Kana iwe uchifanira kunyorova nekukurumidza mushure mekuveura ndebvu, sarudza kirimu fomula pane kwete mafuta ekuzora, uye dzivisa exfoliating moisturizers inogona kunge iine alpha hydroxy acids.
2. Kuenda kunoshambira. Ganda richangobva kuveurwa rinokanganiswa nemitezo inokatyamadza yeklorini uye mvura yemunyu, pamwe nemafuta ezuva uye sunscreens ane doro.